Fanodinana plastika malefaka - Filankevitry ny morontsiraka afovoany
FIVORIANA PLASTIK LELEVELO
Nanangana programa fanodinana plastika malefaka ao an-tokantrano ny Central Coast Council. Ny fandaharan'asa, izay tantanin'ny mpiara-miombon'antoka aminay iQRenew sy CurbCycle, dia mikendry ny hanome fomba tsotra sy mahafinaritra ary mahafa-po ho anao hanodina plastika malefaka avy amin'ny fampiononana sy fiarovana ny tranonao amin'ny fampiasana ny dabam-pako fanodinana sarony mavo. Ny mponina rehetra monina ao amin'ny faritry ny governemanta eo an-toerana (LGA) ao amin'ny Central Coast izay manana telefaona finday dia afaka misafidy handray anjara amin'ity programa maimaim-poana ity. Ity ny fomba handraisana anjara:
Ampidino tsotra izao ny App Curby ary misoratra anarana handray anjara
Halefa CurbyPacks ianao amin'ny fanangonana plastika malefaka ao an-tokantrano
Rehefa voarainao ny entanao, dia azonao atao ny mametraka plastika malefaka ao anatin'ny dabam-pako fanodinana sarony mavo amin'ny fampiasana ny CurbyBags sy CurbyTags nomena.
Ny mpandray anjara dia homena kitapo sy marika Curby hanangonana ny plastika malefaka. Ny kitapo misy marika dia hapetraka ao amin'ny kobany mavo, ny plastika malefaka dia sarahina ary havily amin'ny fanariam-pako ary ampiasaina hamoronana vokatra hafa.
Azafady, tadidio fa tsy maintsy mampiasa ny kitapo mavo sy marika manokana ho an'ny trano fanasokajiana fanodinana ianao mba hamantarana ny plastika malefaka anananao, raha tsy izany dia mety handoto ny sasany amin'ireo fanodinana hafa ataontsika ireo plastika malefaka.
Mba hahalalana bebe kokoa, tsidiho ny tranokala Curby eto.
Azonao atao ihany koa ny manohy manodina ny plastika malefaka amin'ny alàlan'ny REDcycle fako ao amin'ny Coles sy Woolworths.